MARIVORAHONA AMBILOBE : Mampiakatra ny vidin-javatra ireo mpivarotra sasany
Efa tazana sahady ny fanararaotana ataon’ireo mpivarotra sasany ao Bazarikely amin’ny fampiakaram-bidin-javatra. Izany dia noho ny fisian’ny fahatapahan-dalana ao Marivorahona Ambilobe. 10 janvier 2019
Raha avy aty Antsiranana dia eo amin’ny 13km tsy hidirana ao Ambilobe no misy lalana tapaka noho ny fisian’ny ranobe. Niakatra araka izany ny saran-dalana aloan’ireo mpandeha, raha ho any Ambanja sy Ambilobe. Betsaka ihany koa ny karazan-tsakafo niaka-bidy aty Antsiranana. Toy ny ovy sy voatabia , ohatra, raha 2000Ariary ny kilao teo aloha teo dia niakatra ho 3000Ariary izany amin’izao fotoana. Araka ny nambaran’ilay mpivarotra sendra tafaresaka taminay dia 20 000Ariary ny mampiampita gony iray avy eo Marivorahona, ankoatra izay efa naloa tamin’ny toerana nanafarana izany, ka voatery mampiaka-bidy izy mba tsy hisian’ny fatiantoka.
Saika nahitana fiakarany avokoa ireo entana hafarana izay miampita eo Marivorahona. Na ireo tahiry talohan’izao fahatapahana izao dia efa niakatra koa.
Tsy azo atao ny mampitsaka olona amin’ny hariva
Amin’ny fisian’izao fahatapahan-dalana ao Marivorahona Ambilobe izao dia namoaka fanambaràna ny ben’ny tanàna ao Marivorahona. Ho fitandroana ny tsy hitrangan’ny loza mety eo amin’ny lalana tapaka izay efa nasiana fanamboarana ao an-toerana ity, dia tsy azo atao ny mampitsaka na mampiampita olona na ny fanaovana “transbordement” manomboka amin’ny 6 ora hariva ka hatramin’ny 5 ora maraina. Tsara marihina fa tsy nitazam-potsiny ireo tompin’andraikitra manoloana ny olana misy fa efa mitady vahaolana manoloana izany.
Efa mitohy koa ny asa fanamboarana vonjimaika mba hialana amin’ny fahasarotan’ny fifamoivoizana. Sady efa fampanantenana napetraky ny Praiminisitra ny mba tsy hisian’ny fahatapahan-dalana mandritra ny fotoam-pahavaratra ity ao Marivorahona. Andrasana ny fahavitan’ny asa fanamboarana mba tsy hanahirana ireo mpampiasana ny lalana.